Eriri Laser Machine, CNC Fiber Laser, eriri Laser egbutusị - Guo Hong
Large format n'ụzọ zuru ezu nchọ mgbanwe table laser ọnwụ igwe adopts a n'ụzọ zuru ezu akpaka loading na ebutu usoro, na a jupụtara Herọd safet ...
Nkedo Iron Bed
Nkedo akwa akwa nwere nguzogide ujo ka mma, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịhazi ya na ọkwa dị elu dị elu; n'echiche, n'ibu ka akwa, ihe s ...
Automatic Professional tube Laser tingcha Machine
Akpaaka ọkachamara na-arụ ọrụ na laser na-arụ ọrụ dị elu, nke ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya nke na-ejikọta mgbakọ ...
Ezubere igwe ejiji igwe eriri laser maka ọkpọkọ, dị mfe ịrụ ọrụ. Na ezi mma ọnwụ na ọnwụ arụmọrụ, na tube f ...
Efere na tube Laser tingcha Machine
Efere na ịkụ eriri igwe na-ahụta ịkụcha ihe abụọ dị iche iche dị na igwe ọrụ ahụ. Ọ nakweere, ogbe na pinion ...
Exchange table fiber laser ịcha igwe nwere ike belata ọtụtụ nke metal Ibé akwụkwọ, karịsịa ya mgbanwe table nwere ike ịzọpụta karịa 50% nke ohere na-eri ...
Open ụdị eriri laser ịcha igwe, dum igwe adopts a ogbe na pinion mbanye usoro, pụrụ iche e mere maka nile di iche iche nke metal Ibé akwụkwọ. M ...
Igwe akụrụngwa ọkụ laser nwere ike iji isi eriri laser nke ụwa na-ebute laser dị ike nke na-elekwasị anya n'ihe ...
Isi ụlọ ọrụ Guohong Laser Group dị na Nr. 1203, Laser Industrial Park, Luohu District, Shenzhen. Ọ bụ ọkachamara na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ahịa nke ngwa akụrụngwa laser. The ụlọ ọrụ nwere a ngụkọta aha isi obodo nke 130 nde yuan. Guohong Group nwere Guohong Laser Technology Hebei Co., Ltd., nke kpuchiri ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 12,000, na Guohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd., nke kpuchiri ebe 15,000 square mita. Mita. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ mba elu teknụzụ dị ka ike onuete ịgbado ọkụ, atọ-Chuck online anwụrụ ọnwụ, wdg Ọ meriwo mba elu-tech enterprise, pụtara ìhè onwe technology enterprise, pụtara ìhè enterprise na Hebei Province, kpakpando enterprise na Jiangsu Province , nkwekọrịta na ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi, wdg. Guohong Laser Group bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ laser ịcha igwe na-emepụta ihe R&D…
Igba Aluminium Doo
Isi ọgụgụ isi
Ọgụgụ isi Digital Chuck
Professional tube Tubecha Software
Ezigbo 0 Tailing
Ndị ọkachamara ọkachamara na ndị na-ewu ụlọ
Nwee otu ndị na-ewu ụlọ ọrụ injinịa siri ike; jikọtara ọnụ na-arụ ọrụ teknụzụ, usoro ihe owuwu echichi, na usoro ntinye tupu echichi; hụ na ọganihu nke ọrụ ọ bụla.
Nnwale siri ike iji hụ na ịdị mma
Emere usoro nyocha siri ike na usoro mmepụta, na ntọala ntọala maka mmesi obi ike ịdị mma ngwaahịa amalitela site na mbido nhọrọ nke akụrụngwa. N'ime usoro ahụ, site na mmepụta nke usoro dị iche iche, na nyocha tupu ahịa nke ngwaahịa a rụchara, ọ bụrịrị ihe dị n'elu Ihe dị n'elu na-enye nkwa siri ike maka ngwaahịa a.
Advanced mmepụta akụrụngwa, n'oge nnyefe
Anyị na ụlọ ọrụ 500 dị elu nke ụwa rụkọtara ọnụ ọtụtụ oge, na-enye ngwaahịa ngwaahịa akụrụngwa yana mmesi obi ike oge; ewebata nnukwu ọnụ ọgụgụ CNC machining emmepe iji hụ na izi ezi na dịtụ oké ọnụ ahịa!
Ezigbo ọrụ ahịa ahịa
Nye mba 7 24 awa ọrụ hotline, gọọmentị webụsaịtị ikpo okwu; nkwenye nke njirimara ngwaahịa, ọ bụrụ na nsogbu bilitere, kpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla iji dozie ha n'oge; mgbe niile (n'ime afọ atọ) nloghachi na ndị ọrụ wee nye nduzi teknụzụ n'oge ọ bụla;
Laser ọnwụ bụ a na-abụghị ndị na kọntaktị ụdị, dabere na a kwes n'ichepụta usoro ...
Na ndụ kwa ụbọchị, anyị na-akpọkarị ígwè ọkpọkọ ịgụnye dị ka ígwè ọkpọkọ, bu ...
Mgbe ị na-eji igwe ịkụcha laser, nsogbu na-ebilite n'ihi ogologo oge ...
Na Eprel 22, IE expo China 2021 agwụla na Shanghai, China. Anyị nwere esta ...
Laser ọnwụ bụ dochie omenala n'ibu mma na invisibl ...